Hoggaamiyeyaasha xibiyada midigta oo ka aamusan fikirka Liberalerna - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sumadda xisbiga Sverigedmokraterna. sawir: Janerik Henriksson/TT
Hoggaamiyeyaasha xibiyada midigta oo ka aamusan fikirka Liberalerna
Xisbiyada oo ku jah-wareersan sidey u abbaari lahaayeen SD
La cusbooneeyay måndag 12 september 2016 kl 17.29
La daabacay måndag 12 september 2016 kl 13.09
Hoggaamiyaha xisiga Liberalerna (L) Jan Björklund ayaa qaba in xisbiga Sverigedemokraterna (SD) lagu casumo wadahaddallada wada-tashi oo ay dawladdu ku casunto xisbiyada mucaaradka ee looga tashado su’aalaha kala duwan ee siyaasadda.
Jan björklund ayaa sidan ku macneeyay fikirkiisa:
– Dawladda ayaa go’aamisa xisbiyada ey wada-tashiga ku casumeeyso, hase yeeshee waxaan anigu aamin-sanahay in dhammaan xisbiyada xubnaha ku leh baarlamanka lagu casumo.
– Macnaheedu maahan middaa in heshiis guud lala wada gaaro dhammaan xisbiyada, hase yeeshee waxaa laga maarmi lahaa fikirka shahiid-nimo ee uu yeeshay xisbiga SD. Sidaa daraadeed waxay ila tahay in xisbiyada oo dhammaan lagu casumo wada-haddallada, sida uu sheegay Jan Björklund.
Dhawaaqyo kuwaa la mid ah ayaa horay uga soo yeeray hoggaamiyaha xisbiga kristdemokraterna Ebba Busch Thor. Intii aaney bilaaban wada-haddalladii siyaasadda ee soo-galootiga, kolkaasina oo ay sheegtay inay wanaag-sanaan lahayd in xisbiga SD uu qayb ka ahaado wadahadallada, maadaama uu haddii kale xisbigu suurtagal u helayo daabacaad ka ballaaran haddii uu bannaanka ka taagan yahay.
Hoggaamiyaha xisbiga Moderaterna Anna Kinberg Batra ayaa maanta ka gaabsatay inay ka faalooto fikirkaa, hase yeeshee dhowaantan mar la waydiiyay inay ku casumi lahayd xisbiga SD wadahadallo haddii ay awoodda gacanta ku dhigto sheegtay inay si kale ammuurtaa u maarayn lahayd:
– Waxaan soo ban-dhigi lahaa qorshe ka wanaag-san midkan ay dawladda iminka maamulka gacanta ku haysaa soo ban-dhigtay ee la xiriira sidii looga hor-tegi lahaa faqooqnaanta dalka ka aloosan. Hoowshaasina oo aan la kaashan lahaa xisbiyada garabka midig ee alliansen-ka. Tallaabadaasina oo aan ahayn mid lala wadaagi karo xisbiga Sverigedemokraterna.
Laakiin haddii aad xisbiyada wadahadal ku casumi lahayd xisbiga sD mak u jiri lahaa?
– Waxaan shiishadda saari lahaa siyaasaddu waxa ay kunsaab-san tahay waana sababta aan u doonayo inaan hoggaamiyo xisbiyada isu-tagga ee Alliansen-ka, maadaama Sweden u baahan tahay sidii looga hor-tegi lahaa caqabadda faqooqnaanta, waxna looga qaban lahaa, isla-markaana ammaanka loo adkeyn lahaa haddii aan dhowr ka magacaabo. Mana ahan siyaasad lagala wada-shaqeeyn karo xisbiga SD.
– Siyaasaddayadu aad bay u kala duruk-san tahay, waana sababta aanan u dooneyn inaan wada shaqeeyn la yeelanno, sida ay sheegtay Anna Kinberg Batra.
Siday kuula muuqataa in aannu Stefan Löfven wadahadallada ku casumin SD?
– Isagu waa inuu su’aashaa ka jawaabo, ayay ku jawaab celisay Kinberg Batra
Xoghayaha xisbiga Center-ka Michael Artursson ayaa sidoo kale sheegay in tallaabadsi tahay mid u taala madaxa dawladdu sidii uu ka yeeli lahaa iyo xisbiyada uu wada-hadalka ku casumayo.
Hase yeeshee sida uu qabo hoggaamiyaha dalka Sweden Stefan Löfven in xisbiga Sverigedemokraterna uu yahay xisbi ka soo jeeda xag-jir-nimo sidaa daraaddeedna ay weli aanay suurtagal ahayn in wada-hadallo siyaasadeed lala galo. Fikirkaasina oo uu xisbiga Miljöpartiet (M) la qabo.
Fredrik Furtenbach oo laanta wararka Ekot uga faallooda siyaasadda arrimmaha gudaha ayaa sidan ku macneeyay fikirka uu soo ban-dhigay hoggaamiyaha xisbiga liberalerna Jan Björklund:
– Waxaa loo fasri karaa jah-wareerka ka aloosan xisbiyada muddaba dalka ka jirey iyo habkii ey u maareeyn lahaayeen xisbiga Sverigedemokraterna, maadaama uu xisbiga SD taageeradiisu kor u kacday inkastoo faqooq uu ku jiray, isla-markaana ey xubno ka mid ahi ku tallaabsadeen falal aan wanaag-saneyn oo haddii xisbiyada kale ku kici lahaayeen wax-yeelo balaaran gaarsiin lahaa, sida uu sheegay Furtenbach.
– Mushkiladda haysata xisbiyada kale ayaa ah in haddii ey xisbiga Sverigedemokraterna ku casumaan wada-hadallada uu xisbigaasi u muuqanayo xisbi la mid ah xisbiyada kale. Dhanka kale haddii aan lagu casuminna u muuqanaya xisbi bannaanka ka taagan oo isaga oo keliyana uu runta ka hadlo, waana midda uu doonayo xisbiga SD. Mana jiro xisbi xal middaa u haya ayuu Fredrik Furtenbach ku soo gaagabeeyay faalladiisii.